Konke malunga neAmsterdam-Yintoni ongayibona, into oyenzayo kunye nezicwangciso zakho ezilungileyo | Ukuhamba kwe-Absolut
IAmsterdam sisixeko esiseNetherlands kwaye siseYurophu. Yayisungulwa apho ngenkulungwane ye-XNUMX ngokungathi yayiyilali encinci yokuloba. Into ekuhambeni kwexesha ibe yenye yezona ndawo zibalulekileyo kwindawo kumanqanaba amaninzi kwaye ukhenketho yenye yazo.
Enye yezona zinto zibangela umdla yimijelo yayo, kuba nokuba ijongeka phi na, ihlanjwa yiyo. Zikwiikhilomitha ezingaphezu kwe-100 ngohlobo lwemijelo, kunye neebhulorho zazo, kunye nezindlu zazo ezidadayo ezitsala umdla omkhulu. Ukuthetha ngezindlu ezidadayo, asinakulibala ngeNtengiso yeentyatyambo nayo edadayo kwaye isukela kwinkulungwane ye-XNUMX. Kuyo unokufumana iindidi ezininzi zebhalbhu.
Isinyanzelo sokumisa inkcubeko sikwiMyuziyam yaseVan Gogh, apho kuboniswa ingqokelela yemisebenzi yakhe. Ukulandela indlela, akukho nto ifana nokuthatha umfanekiso weegadi zeBegijnhof kwaye ufikelele entliziyweni yesixeko enegama leDam Square, indawo enomoya omninzi. Isithili sokuKhanya ngokuBomvu sesinye sezona zidumileyo, apho ungandwendwela icawe i-Oude Kerk, kunye ne-Jordaan District kwaye kunjalo, i-Anne Frank House, ekwayenye yeempawu zendawo. Ukucinywa, akukho nto ifana neVondelpark yokugqibezela kwiMyuziyam yaseAmsterdam okanye eRijksmuseum, ekubonelela ngayo yonke imbali yendawo.
Yintoni ongayibona eAmsterdam kwiintsuku ezi-3
Ukuba ucinga malunga nento oza kuyibona eAmsterdam kwiintsuku ezi-3, siza kukubonisa ezona ndawo zibalaseleyo ...
IVolendam, ilali yemveli yokuloba
Namhlanje siya eVolendam. Yidolophu encinci ekumantla eAmsterdam kwaye ...
I-Amsterdam Red Light District: izibane, umbala kunye nemiboniso
I-Amsterdam yaseDatshi iyaqhubeka ukubonwa njengenye yezona ndawo zinenkululeko, ezembali kunye nezinqwenela ukwenzeka eYurophu. Isixeko esikhulu ...
Amasiko, indlela yokuphila kunye nemikhwa eAmsterdam
por I-Absolut yaseAmsterdam yenzayo 6 iminyaka .
Abahlali baseAmsterdam bahlala besaziwa ngokunyaniseka nangokunyaniseka kwabo. Indoda esisityebi ayinakuze ibonise eyayo ...
INetherlands iqhuba kakuhle kwizikhombisi ezininzi zentlalo-ntle, xa kuthelekiswa namanye amazwe amaninzi…
por I-Absolut yaseAmsterdam yenzayo 7 iminyaka .
IAmsterdam likomkhulu laseNetherlands. Yaziwa ngokunyamezelana neziyobisi, inkululeko yabantu ...
Indlela yokuphila eAmsterdam
IAmsterdam sisixeko esinika ulwazi olunomona kubo bonke abatyeleli. Ipaki enkulu ebizwa ngokuba yiVondelpark ibonakala, ...
Itempile ka-He Hua Buddhist eAmsterdam
Itempile ye-Hua yeyona tempile inkulu yaseYurophu yaseBuddhist kwisitayile sendabuko saseTshayina. Ime kwindawo yaseAsia ...